Aquamarine - buluug kala duwan oo buluug ah ayaa had iyo jeer u isticmaala sida dahabka dahabka - dahabka
Stone Aquamarine waa nooc buluug ah oo beryl ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sida dhagaxa qaaliga ah ee dahabka: giraan kaqeybgalka aquamarine, silsilado, hilqado, jijin…
Ka iibso aquamarine-ka dabiiciga ah dukaankeenna
Waxay ku dhacdaa deegaannada badankood ee keena beryl caadi ah. Kaydinta miraha dhalada-cagaarka ee Sri Lanka waxaa ku jira aquamarine. Aquamarine Chrysolite waa dhagax cagaaran oo huruud ah, oo ka dhaca Brazil. Maxixe waa nooc buluug ah oo qoto dheer oo aquamarine ah, oo badanaa laga helo dalka Madagascar. Midabkeedu wuxuu u baaba'ay caddaan xagga qorraxda. Waxay sidoo kale u gudbi kartaa sabab u ku daaweynta kuleylka awgeed. Midabku wuxuu kusoo laaban karaa raad-raaca hawada.
Midabka buluugga ah ee midabka buluugga ah ee loo yaqaan 'aquamarine Stone' waxaa loo aaneeyey Fe2 +. Fe3 + ion waxay soo saaraan midab-dahab huruud ah, iyo markii labadaba Fe2 + iyo Fe3 + ay joogaan. Midabku waa buluug mugdi ah sida maxixe. Qurxinta maxixe ee iftiinka ama kuleylka sidaas awgeed waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay wareejinta lacagta inta u dhaxaysa Fe3 + iyo Fe2 +. Midabka buluugga ah ee buluugga ah ee loo yaqaan 'maxixe brown' waxaa lagu soo saari karaa cagaar, sidoo kale casaan casaan ama hurdi huruud ah ayagoo lagu buufiyo walxaha tamar badan. Raajooyinka Gamma, sidoo kale unugyada aasaaska ama raajada.
Halabuurka kiimikada ee Beryl waa beryllium aluminium cyclosilicate oo leh qaaciddada kiimikada ee Be3Al2 (SiO3) 6. Sidoo kale, noocyo caan ah oo loo yaqaan 'beryl' waxaa ka mid ah sumurud, sidoo kale aquamarine, heliodor, Iyo morganite. Dabiici ahaan, kareemada laba-geesoodka ah ee berylku wuxuu noqon karaa ilaa dhowr mitir oo cabbirka. Cabbiraadyada la joojiyay way yar yihiin. Dhagax safka ahi waa mid aan midab lahayn, midabkuna wuxuu ku xiran yahay isugudbinta. Midabada suurtagalka ahi waa cagaar, buluug, jaalle, casaan (caanaha), iyo caddaan. Waxa kale oo ay tahay ilaha cagaarka ah ee beryllium.
Beryl ayaa iska leh nidaamka kareemka laba-geesoodka ah. Caadi ahaan waxay ka kooban tahay tiirarro laba geesood ah laakiin waxay sidoo kale ku dhici kartaa caadooyin badan. Sida muraayada loo yaqaan 'Cyclosilicate' wuxuu ku daraa siddooyinka silicate tetrahedra kuwaas oo loo qaabeeyey iskuxiryada weelka C iyo sida lakabyada isku midka ah ee cirifka C, oo sameeynaya wadiiqooyinka ku yaala C axis. Wareegyadani waxay ku dhex jiraan ionions kala duwan, jajabyo dhexdhexaad ah, iyo molecules galay kareem. Sidaa oo ay carqaladeeyeen guud ahaan masuuliyaddii macdanta u oggolaanaysa beddelaad kale oo Aluminium, Silicon, iyo Beryllium ah oo ku yaala qaab dhismeedka "Crystal". Midabada kala duwan waxay ka yimaadaan nijiyada. Kordhinta maadiga alkaliga ah ee ku jira kanaalka silicate ayaa sababa kororka calaamadaha xasaasiga ah iyo sharraxaadda.
Aquamarine macnaha iyo guryaha
Aquamarine waa dhagax geesinimo. Awooddeeda dejintu waxay yareysaa buuqa oo waxay xasilisaa maskaxda. dhagaxa tje wuxuu xiriir la leeyahay dad xasaasi ah. Waxay ku baaqi kartaa dulqaadka dadka kale waxayna ka adkaaneysaa xukunka, iyadoo siineysa taageero kuwa ay culeyska ka qaadeen.
Aquamarine, the March dhalashada, wuxuu leeyahay midab hodan ah muddo dheerna astaan ​​ayuu u ahaa dhalinyarada, caafimaadka iyo rajada. Midabkiisa soo jiidashada leh wuxuu u dhexeeyaa cirro ilaa buluug qoto dheer wuxuuna ku xasuustaa badda.
Waxaan u sameysannaa dahabka aquamarine dhagax sida giraanta ka qeyb qaadashada, silsiladda, hilqadaha, jijimad…
Si aad u aragto sidoo kale:
Aquamarine indhaha bisadda, buluug beryl shucaacay iyo Waa maxay giraan ku salaysan?
Aquamarine ma dhagax qaali ah baa?
Waa mid qaali ah. Maanta qaar ka mid ah dhagaxyo qaali ah oo qaali ah ayaa ka qiimo badan wax ka badan dhagax qaali ah.
Miyuu aquamarine leeyahay macno gaar ah?
Aquamarine sidoo kale waxay la xiriirtaa xasilloonida, xasilloonida, caddaynta, iyo wada noolaanshaha. Maaddaama uu yahay kan ugu horreeya ee dhalashada guga, muraayadda buluugga ah ee buluugga ah waxay u taagan tahay isbeddel iyo dib u dhalasho. Waxay ka kooban tahay firfircoonida dhalinyarada, daahirnimo, daacadnimo, rajo, iyo run.
Waa maxay aquamarine tayo fiican leh?
Midabka qiimaha badan ee jawharadku waa buluug mugdi ah oo buluug xoogaa cagaar ah lehna xoog dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Guud ahaan, midabka buluugga ah ee saafi ah kana sii daran, ayaa ka qiimo badan dhagaxa. Midabka dhagaxa badankiisu waa buluug cagaar khafiif ah.
Waa maxay awooda aquamarine leedahay?
Waa dhagax geesinimo. Awooddeeda dejintu waxay yareysaa buuqa oo waxay xasilisaa maskaxda. Gemstone wuxuu xiriir la leeyahay dadka xasaasiga ah. Waxay ku baaqi kartaa dulqaadka dadka kale waxayna ka adkaaneysaa xukunka, iyadoo siineysa taageero kuwa ay culeyska ka qaadeen.
Ma xiran kartaa aquamarine maalin kasta?
Iyada oo midabkeedu yahay buluug baraf ah, ayaa soo bandhigaya aura sixir ah. Iyada oo leh adkaansho wanaagsan, dhagax dhagax-buluug ah ayaa ah xulasho aad u wanaagsan oo loogu talagalay xirashada maalinlaha ah. Hadday rasmi tahay ama dhacdo aan caadi ahayn, midna weligiis kuma khaldami karo hilqado aquamarine ah.
Waa maxay chakra aquamarine u fiican yahay?
Iyada oo ay weheliso furitaanka iyo firfircoonida wadnaha, xarunta tamarta ee la xiriirta jacaylka iyo naxariista aan shuruud lahayn, waxay sidoo kale taageertaa bogsiinta jirka. Iyada oo kicinaysa cunaha cunaha, jawharadku wuxuu ka caawiyaa kor u qaadista difaaca iyadoo la furayo socodka u dhexeeya wadnaha iyo xarumaha tamarta cunaha.
Muxuu aquamarine ruuxi ku qabtaa?
Had iyo jeer waxaa loo tixgeliyaa inay tahay marinka marinka ruuxi ahaanta loo helo, Dhagaxu wuxuu kaa caawin karaa inaad ku dhowaato xiriir dhow oo lala yeesho muujinta kore ee xagga ruux ahaanta iyo naftaada gudaha ah.
Maxaa loo isticmaali karaa aquamarine?
Waa dejin, dejin, iyo nadiifin, waxayna dhiirrigelisaa runta, kalsoonida iyo sii deynta. Xilliyadii hore, waxaa la rumeysan yahay inay tahay khasnadda meeriska, waxaana badmaaxiinta u isticmaali jireen inuu yahay nin nasiib badan, cabsi la'aan iyo ilaalin. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyey dhagax dhallinyar weligiis iyo farxad leh.
Sideed u ilaalisaa aquamarine dhalaalka?
Sababtoo ah midabkiisa fudud, dhagaxu wuxuu yeelan karaa wasakh ama daruuro marka aad xidhato giraanta. Nadiifinta dhagaxaaga badanaa waxay ilaalin kartaa qurux iyo dhalaal. Si aad u nadiifiso giraanta ka qaybgalka aquamarine ama hilqadaha, ku maydh biyo diirran oo saabuun leh iskana ilaali inaad ku kacdo wax kasta oo dhaawacaya dhagaxa.
Waa maxay goynta ugu fiican ee dhagaxa aquamarine?
Jirka ugu caansan waa qaabka emerald ee octagon octagon. Xirfadlayaal badan oo ku xeel dheer dahabka ayaa rumeysan goynta laba jibbaaran ama leydi ah inay dhameystireyso dhagaxa ugu fiican Princess iyo pear ayaa sidoo kale la door bidaa.
Waa maxay macnaheedu haddii dhalashadaadu ay tahay aquamarine?
Maarso. Waqtiyadi hore, dadku waxay aaminsanaayeen aquamarine, oo ah astaamihii dhaqameed ee bishii Maarso, badmaaxayaashu waxay ilaalinayeen inay ka caawiso inay si cad u xasuustaan ​​kuwii ay jeclaayeen markay badda ka fogaayeen. Xirashada dhagaxu waxay kor u qaadeysaa hal-abuurka, rajada, is muujinta iyo geesinimada.
Aquamarines ma dhif iyo naadir baa?
Maxay qaali uga tahay wax ka badan topaz buluug ah oo ku dhowaad isku midab ah? Topaz buluug ayaa aad ugu badan maxaa yeelay midabka waxaa lagu soo saaraa iyada oo lagu daaweeyo topaz midab aan midab lahayn oo leh shucaac. Way ku yar tahay dabeecadda, gaar ahaan midabka wanaagsan. Taariikhdeeda dheer ee jawharadku waxay kaloo ku darsataa ururinta.
Waa maxay giraanta ka qaybgalka aquamarine?
Kaliya maahan dhalashada Maarso, laakiin waa jawharad loo qoondeeyay in la siiyo sannad-guurada 19-aad ee guurka. Dhagaxa waxaa la rumeysan yahay inuu astaan ​​u yahay caafimaadka, geesinimada, iyo isgaarsiinta cad, dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah guur kasta, oo laga yaabo inay ku xisaabtamaan caan ku ahaanta faraanti galinta.
Mudo intee le'eg ayuu aquamarine soconayaa?
Xaqiiqdii, noocyo fudud ayaa xitaa lagu qaldi karaa dheeman. Si kastaba ha noqotee, qiimeyntiisa Mohs 'Miisaanka 7.5 ilaa 8 waxay muujineysaa in, iyada oo lebis aad u daran, ay muujin karto calaamadaha xoqitaanka waqtiga. Hase yeeshe, daryeel habboon iyo adeeg, jawharaddan quruxda-cagaaran ee quruxda badan ayaa socon doonta inta uu nool yahay.
Keebaa qaali ah aquamarine ama topaz?
Hilqadaha 'Aquamarine' guud ahaan aad ayey uga qaalisan yihiin topaz buluug ah, sababta ugu weyn ee jirta ayaa ah in topazka buluuga ah uu si dabiici ah u kululeeyo halka aquamarine uu yahay midab dabiici ah. Si kastaba ha noqotee, giraantu waxay kudhowaad labanlaab tahay qiimaha giraanta buluugga buluugga ah.
Sideed u nadiifisaa faraantiga aquamarine?
Habka ugu fudud ee loo daryeeli karo dhagxaantaada waa inaad ku mayrtaa biyo diirran oo saabuun leh: Ku buuxi baaquli yar biyo diirran kuna dar qadar yar oo saabuun saxan ah. Qurxintaadu ha qoyso dhowr daqiiqo ka dibna isticmaal burush jilicsan oo jilicsan si aad u nadiifiso dhagaxa.
Waa maxay sheybaarka la abuuray aquamarine?
Dhagaxyada shaybaarka la abuuray waa kuwo la soo saaray. Haddii aad jeclaan lahayd inaad lahaato dahabka ka kooban dhagax dhagax dabiici ah laakiin aad u aragtay inuu aad qaali u yahay, waxaad ku raaxeysan kartaa quruxda aquamarine adoo iibsanaya aquamarine synthetic qayb yar oo ah qiimaha aquamarine-ka dabiiciga ah.